Dal dibadbax lagu qaban waayey doorasho xor ah maka dhici kartaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Dal dibadbax lagu qaban waayey doorasho xor ah maka dhici kartaa?
Dadka ka faalooda siyaasadda, ayaa shaki galinaya qabsoomida doorasho xor ah, xilli hoggaanka waqtigiisu dhamaaday, uu is hortaagay dibadbax ay shacabku dareenkooda ku muujinayaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaanka waqtigiisu dhamaaday, ee sifada sharci darrada ku fadhiya madaxtooyada, ayaa hor taagan in shacabka Muqdisho, ay dhigaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan, nidaamka keli talisnimada, ee Farmaajo uu doonayo inuu dalka ku qabsado.
Quradan sida dhaw ula socda xaaladda dalka ayaa tibaaxaya, in culeyska ka jira qabashada dibadbaxa, uu ka dhigan yahay, in hoggaanka dalka aanu rabin qabsoomida doorasho caddaalad ah, oo ka madax bannaan masuq iyo eex.
Walaac xooggan ayaa sidoo kale ka imaanaya, in doorashada Aqalka Hoose ay ku soo idlaato waqtigii loo qorsheeyey ee ah 25-ka bisha Febraayo, taas oo mar kale caqabad ku noqon doonto howlaha doorashooyinka dalka.
Qubarada ayaa sheegay in maamullada, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, iyo Galmudug, ay ku fashilmi doonaan doorashada ka dhici doonta deggaanadooda, sababo ku aaddan xiriirka ay la leeyihiin hoggaanka fashilmay, kaa oo ka hor istaagaya in ay qabtaan doorasho daah-furan.
Doorashada dalka oo uu mar labaad boob hareeyo, ayey qubaradu sheegayaan, in ay keeni karto qalalaase iyo xasilooni darro, taas oo dhaawici doonta nidaamkii qori isku dhiibka ahaa iyo hannaanka dowlad wanaaga, waana mid dalka ku hagi doonta waddo aan qurxaneyn.
Maciisha Caasimadda oo kor u kacday